Tani waa mid aad u fudud miiska albaabkaku shaqeeya kaliya batari. Qaar badan oo naga mid ah Miisaanka albaabka waa alaab shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ku saabsan tirinta albaabada.
Tirada qulqulka rakaabka ayaa hada ah hogaamiyaha ugu weyn suuqa. Saamaynta goobta juquraafi ahaan, deegaanka, taraafikada iyo arrimo kale, falanqaynta iyo tirakoobka tirada qulqulka rakaabka waxaa lagu fulin karaa si cilmiyaysan oo wax ku ool ah, iyo go'aamada hawlgalka ee suuqa oo dhan waxaa lagu sameyn karaa waqti ku habboon, kaasoo noqday horumar ah. Doorka muhiimka ah ee qaabka ganacsiga suuqa, adeegsiga habab cilmiyeed si loo ururiyo xogta socodka rakaabka ayaa ah hab lagu hanan karo fursadaha ganacsi ee suuqa oo dhan.
HPC001 miiska albaabku waa aalad tirinta tirinta socodka rakaabka. Way yar tahay, fududahay, aadna u fudud in la rakibo. Waxay sidoo kale bixisaa maareyn xog dhameystiran. Si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha, waxaa lagu rakibaa oo loo adeegsadaa dukaamada waaweyn, suuqyada laga dukaameysto, iyo dhammaan iridda laga soo galo dukaamada. La horumariyay, HPC001 tirinta albaabadasi fudud ayaa loo tirin karaa tirada qulqulka rakaabka markasta oo maalintii ah, taas oo ku habboon in ganacsatada la siiyo tixraac nidaamsan. Isbeddelka ku yimid qulqulka rakaabka, aagga oo dhan si macquul ah ayaa loo qaybin karaa, kheyraadka aadanaha si macquul ah ayaa loo habeyn karaa, iyo xakamaynta kharashaadka hawlgalka ee xarumaha laga dukaameysto iyo dukaamada waaweyn. Marka la isbarbar dhigo qulqulka rakaabka xilliyada kala duwan, istiraatiijiyadaha suuqgeynta iyo dhiirrigelinta waa la hagaajin karaa, taas oo si weyn u kordhineysa danaha suuqyada waaweyn. Waxay ku habboon tahay meelaha tafaariiqda, meelaha dhaqanka iyo isboortiga, meelaha madadaalada, meelaha dadweynaha iyo meelaha kale.
Astaamaha xisaabiyeyaasha albaabbada HPC001
1. HPC001 miiska albaabka waa Iyadoo leh laba luuqadood oo shaqeynaya, Shiinaha iyo Ingiriiska.
2. Shaashadda LCD-ka oo ah 1.15 inji
3. Ku tirinta albaabada batteriga waa la beddeli karaa lixdii biloodba mar hawlgalka, kaas oo ku habboon oo fudud.
4. Dejinta habboon iyo maaraynta, oo ay ku shaqeyn karaan badhannada miiska saaran.
5. Ku miiska albaabka Kaliya waxaad ubaahantahay inaad sameyso maareynta miisaanka iyada oo loo marayo Windows, looma baahna barnaamij dheeri ah.
6. Cabbir yar (113 * 67 * 20 mm) iyo miisaan fudud 213 garaam.
7. Iftiinka on tirinta albaabada muujinta ayaa iftiimin doonta marka qof dhaafo.
8. Dardar ayaa ka muuqan doonta shaashadda markii batterigu hooseeyo.
9. Degdeg ayaa ka soo muuqan doona shaashada markii uu signaarku daciifo.
10. Caadi ahaan ku xisaabi inta u dhexeysa 2,5 mitir, laakiin waxaa la gaarsiin karaa ilaa 9 mitir faragelin la'aan.
11. Ku tirinta albaabada xusuusta gudaha waxay keydin kartaa ugu yaraan 500 saacadood oo rikoor ah.
12. Saldhiga caaga ah iyo qalabka jir wada jir ah ayaa lagu xulan karaa hadba sida ay doonaan.
13. Ku tirinta albaabada Xogta waxaa lagu soo saari karaa taariikhda iyo waqtiga.
Waxaan leenahay noocyo badan oo IR ah miiska albaabka, 2D, 3D, AI albaabka dadka counter, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan kugula talin doonnaa midka ugu habboon miiska albaabka adiga 24 saac gudahood.
MRB albaabka dadku waxay kahortagaan fiidiyowga HPC005
Hore: MRB dadka otomaatiga ah waxay ka hortagaan HPC005S
Xiga: Miiska taraafikada tafaariiqda MRB ee loogu talagalay dadka tafaariiqda ee tirinaya HPC002
Dadyowga Ka Tilmaamaya Bera
Tirakoobka Beam-ka Infrared
Tirakoobka Dadka Beraysan
Xadgudubka Dadka Beraysan